Pluto na thlọ nke 7: Eziokwu Eziokwu Banyere Mmetụta Ya na Ndụ Gị na Persondị Mmadụ - Ndakọrịta
Isi Ndakọrịta Pluto na 7th House: Eziokwu Eziokwu Banyere Mmetụta Ya na Ndụ Gị na Persondị Mmadụ
Pluto na 7th House: Eziokwu Eziokwu Banyere Mmetụta Ya na Ndụ Gị na Persondị Mmadụ
Ndị a mụrụ na Pluto n'ụlọ nke asaa nke usoro ọmụmụ ha jikọtara n'echiche nke ezi ezinụlọ, ọnọdụ dị nso na nke ịhụnanya n'ụlọ. Mmekọrịta na-mesiri ike karịsịa ebe a. A sị ka e kwuwe, ha chọrọ imezu ihe ndị ha ji mara na ha bụ ndị nke.
Ọ bụrụ na ọ bụ mmetụta ịhụnanya na mmetụta uche siri ike na-akpali ha, ihe niile dị mma na atụmanya nke mmekọrịta dị ogologo na-eto eto.
Tinye na 7NkeNchịkọta ụlọ:
Ike: Nghọta, mmetụta na ike
Nsogbu: Ime ihe ike, esemokwu na ntụkwasị obi
Ndụmọdụ: Ha kwesịrị ịhapụ ha ka ha jiri obi ha niile kwuo uche ha
Aha ndị a ma ama: David Bowie, Ryan Gosling, Whitney Houston, Orlando Bloom.
Esemokwu na-apụtakarị, n’etiti mkpa ọ dị ha ịdị na mmekọrịta, ihe na-eri ihe niile, yana mmetụta na a kpọchiri ha n’ime ngịgị enweghị ume iku ume.
Inye aka na njirimara ha
A ga-enwe esemokwu na ha mgbe niile. Ma ọ bụ ihe kpatara ya site na nkwụsịtụ na ọchịchọ ha ịkatọ ma kpasuo hel iwe na onye ọ bụla ma ọ bụ ụjọ ha na-achịkwa, ọ ga-ebute esemokwu.
Ndị Pluto nọ na ụmụ amaala ụlọ 7th nwere mmasị na ndị mmadụ na-eme ihe, na ndị na-eme ihe ike na ndị na-adịghị ahụkebe, ụdị nke ị na-amaghị ihe ha ga-eme.
Enweghị usoro na mmụọ mgbanwe bụ ihe na-adọrọ ha mma. Agbanyeghị, ha nwere ọpụrụiche pụrụ iche n'iwepụ akụkụ kachasị oke na ọgụ ike nke ndị mmekọ ha, na-eme ha ara.
Ha nwere akuku na akuko a dum. Ọ bụghị na ha bụ ndị ebighi ebi metụtara onye ọ bụla lashes. Ha bụ ndị na-eme ka ihe niile na-eme na omume ha.
Ọ bụ n'ihi na ha na-atụ ụjọ ịhapụ onye ahụ pụrụ iche, ịhapụ naanị ha ma gbahapụ ha.
Nke a na-eme ka ha jidesie aka ike, iji chịkwaa ọnọdụ ahụ ma tinye uche ha. Nke a, n'aka nke ya, na-akpọte nnukwu anụ mmiri na ndị mmekọ ha.
Isi okwu nke ọnọdụ dị ebe a bụ na ha amabeghị onye ha bụ. Nsogbu amata, enweghị ntọala ime mmụọ, ụkpụrụ nke mmadụ iji nwee ntụzịaka. Ha na-anwa ichota onwe ha site na mmekorita na mmekorita nke ndi mmadu.
Site na ahụmịhe na ọtụtụ ọdịda, ha ga-emecha ruo ogo tozuru etozu ebe ha maara ihe ha chọrọ na otu esi ekele ya.
Egwuregwu na egwuregwu mmekọrịta bụ ule nyocha zuru oke iji chọọ njirimara nke onwe ya. Itinye aka na ihe ọ bụla dị oke njọ nwere ike ibute ndakpọ olileanya na nsogbu na-akpata nsogbu ma ọ bụrụ na nkwụsịtụ esoro.
Pluto na 7Nkendị nwe ụlọ na-ele mmekọrịta na mmekọrịta ịhụnanya anya dị ka usoro na-agwọ ọrịa. Ha na-ejikwa ya teta ihe dị n’ime ha.
leo horoscope maka Nọvemba 2015
Mmetụta miri emi, ụdị nke ha na-emetụbeghị mbụ, ibu ọrụ na nghọta, nghọta ebumnobi, nkwụsi ike nke agwa na iwe iwe.
A ga - enwe ọtụtụ esemokwu na - eme site n'oge ruo n'oge, ebe ọ bụ na Pluto jikọtara akụkụ dị oke mkpa nke ịdị adị, nsogbu ndị ahụ ga - apụta.
A ga - enwe nsogbu ike ọkachasị, esemokwu na arụmụka n'ihi na ndị mmekọ abụọ na - anwa ịchịkwa.
Nke a bụ egwuregwu pusi na oke, nke onye na-achịkwa na onye na-edo onwe ya n'okpuru.
Mmekọrịta ha niile dị ka nke a, ọchịchị na-achịkwa ọchịchị. Ọ na - eme site na ịmegharị mmetụta uche oge mgbe otu akụkụ na - arụ ọrụ na mkpa nke onye ọzọ.
Ihe ha ga eme bu imu ka esi eme udo, ndidi, ikpe ikpe ziri ezi, ma mesoo onye obula nha anya. Ọ bụ njem na nchọta onwe onye na-enweghị mkpa ịgafe oke.
Ọtụtụ oge, ndị Pluto nọ na ụmụ amaala ụlọ 7th na-akwụsị ịchịkwa ma jupụta na mmetụta nke erughị eru n'ihi mwute na ncheta gara aga ha na-eweta.
Ma, ọzọ, ha agaghị ekerịta ha oge ọ bụla. Ọ bụrụ na aka ekpe agbasie ike, ọnya ndị ahụ ga na-akawanye njọ ka oge na-aga.
Iji merie nsogbu ndị a, ha kwesịrị inyocha ma nyochaa ọnya ndị a, hụ ha maka ihe ha bụ wee gbalịa ịgwọ ha. Ọ bụrụ na ahapụ ebe ahụ, ọ ga - eme ka esemokwu, enweghị ntụkwasị obi, na iru uju.
Ndị ọkachamara, ụlọ nke asaa nke ndị Pluton dị mma karịsịa na-elekọta ọnọdụ ego nke ụlọ ọrụ, gbakọọ ma mepụta atụmatụ, atụmatụ dabere na data dị adị.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na mmekọrịta ndị a na-enye ego na-aba ụba ma na-arụ ọrụ n'emeghị ihe ọ bụla, ndị nwere mmetụta mmetụta na-adịgide adịgide, ọ dị mwute.
Chọpụta, a ga-enwe ọtụtụ oge nke ọissụ zuru oke na mmụọ nke onye ọ bụla agaghị enwe ike ịmeghachi, mana ndị ahụ bụ naanị udo dị tupu oké ifufe ahụ.
Mara mma n'oge na-adịghị, ruckus na screwed arụmụka ga ogide oge ha niile. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ha jisie ike iwe iwe wee nwee nghọta karịa n’ozuzu ha, ọ bụghị naanị na ọ ga-akara ha mma, mana mmekọrịta ahụ ga-enwe oge ito nke ọma.
Ngwongwo na ihe ojoo
Pluto na 7Nkeakụkụ ụlọ na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ndị ọzọ yana otu mmekọrịta ndị a si emetụta mmepe ọdịnihu nke ụmụ amaala a.
Na mbido, ha ga-adighi ekwesiri inwe ezigbo njikọ, na-enweghị ike ịghọta na eme ihe mmetụta ha.
Ma, ka oge na-aga ma ha mechara ghọta otú ha ga-esi meghachi omume na otu ha ga-esi gosipụta mmetụta ha, mgbanwe zuru oke ga-ewere ọnọdụ.
Ha ga-ahụkarị ndị mmekọ nwere ume siri ike bụ ndị ga-amanye ha ịgbanwe ụzọ ha, nwee obi ike ma nwee oke ọchịchọ, ka mma karịa n’ozuzu ha.
N'ezie, a ga-enwe esemokwu ebe njikwa mmekọrịta dị. Ha na-echekwa na ọ dị ha mkpa ịchọta onye ga-eme ka ha hụ ya n'anya.
Ha na-emegidekwa ngosipụta mmeghe nke mmetụta uche. Kama, ha chọrọ idozi ihe niile site n'echiche na mgbagha, site na nyocha na ime atụmatụ.
Nke a, ọ dị nwute, ọ bụghị ụzọ ahụike maka ịme ihe n'ihi na, oge ụfọdụ, enwere ọtụtụ mmetụta na ịpị ihe ndị na-achịkọta ọnụ.
Ọzọkwa, otu n’ime ihe kpatara ụjọ ji atụ ha itinye na mmekọrịta ogologo oge bụ na ha nwere ike tufuo onwe ha, njirimara ha na ụzọ ha si dịrị.
nwoke aquarius na aries nwanyị enyi
Mmasị na ịhụnanya maka onye nke ọzọ ga-eto eto ruo n'ókè nke na ọ ga-edochi echiche onwe ha kpamkpam.
Mbara ala na ulo: Otu ha si ekpebi udiri mmadu
Ntughari Uzo na Mmetụta Ha Site na A rue Z
Ọnwa na ihe ịrịba ama - Ọnwa Astrological Ọrụ gosipụtara
Ọnwa na Holọ - Ihe Ọ Pụtara Maka Otu Onye
Ngwakọta ọnwa Anyanwụ
Isingrịba ama Ama - Ihe Nwa Gị Kwuru Banyere Gị
Mmekorita Lovehụnanya nke Scorpio
Leo Sun Scorpio Ọnwa: Temdị Onwe Obi
nwoke capricorn merụrụ ahụ n'ịhụnanya
ihe horoscope bụ December 5
scorpio na libra ọbụbụenyi ndakọrịta
njirimara nke a pisces nwoke na ịhụnanya
ihe bu june 19 zodiac sign